Ukuze Ukushisa phansi thermostat elawula imodi bafudumale. Esimisweni elula, ungenza ngaphandle kwalo, uma izinga lokushisa uvo we kokupholisayo ingeqi 50 0 C. Ezimweni eziningi, indlu yangasese kubhayela heats amanzi okuningi futhi lapha thermostat (thermostat) iyadingeka ukuze kuvinjelwe ukushisa overruns futhi okweqile egumbini.
Isimiso esiyisisekelo umsebenzi salo ukucisha Ukushisa ngokushesha njengoba nezinga lokushisa elizosetshenziswa kule phansi noma egumbini ifinyelela inani elithile. Uma phansi selupholile kancane, futhi iqala bafudumale.
Amath- kukhona ezinye zezinhlobo ezilandelayo.
Ehlelwe - I-nekusetjentiswa kwetinhlelo of amazinga ehlukene obulukhuni. Zingasetshenziswa ukusetha lokushisa ezakhiweni, uyishintshe e ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku, kuye ngezidingo kanye ukulondoloza. Ilungiselelo senziwa touch-sensitive izinkinobho. Izindleko amadivayisi enjalo likhulu kunawo wonke, kodwa ekugcineni inxephezelwa ukonga amandla amaningi.
Nge ukufakwa manual kanye turning isibambo control. Idivayisi libhekene lula futhi waba nokwethenjelwa, kodwa isebenta ingasaphathwa.
isilawuli Digital - izinga lokushisa isethwe ngokucindezela.
Thermostat Ukushisa underfloor zingafakwa ngendlela evulekile, lapho bezinhlamvu unamathele odongeni. It kungabuye kufihlwe ekhosombeni udonga lapho lonke imishini bafudumale.
Idivayisi ingaba ibhukwana noma othomathikhi. Esimweni sokuqala, izinga lokushisa phansi isethwe ligijima disk ne esikalini. Indlela zingavumi kakhulu, ngoba idinga ukuqapha njalo futhi ukulungiswa bhukwana we iziphi izici zangaphandle. Ukuvimbela Ukushisa phansi phezu ukufinyelela lokushisa predetermined kwenzeka, kodwa akuyona olunembile kakhulu.
Automation kwenza ukuqapha okuqhubekayo futhi kungekho mithetho elandelwayo. Amapharamitha asethwe ku iphaneli touch noma elawulwa kude.
Ukuze Ukushisa phansi thermostat (amanzi) isebenza kuphela ngokuhlangana ne lokushisa izinzwa kanye actuator, lapho imisebenzi zihlukaniswe ngale ndlela:
Izinzwa asezindaweni screed phansi, indawo elula kunazo egumbini, izindlu thermostat noma zisetshenziselwa ngesikhathi esifanayo. Bona adlulisele amasignali ubukhulu ngocingo noma izinga lokushisa noma zingasebenzi emsakazweni. I izinzwa kungaba elula, infrared, noma oluvundlile double (nesilinganiso ngesikhathi esisodwa lokushisa egumbini futhi phansi bembethe isikhumba).
Thermostat IZINHLELO idatha bese uthumela umyalelo for ukuvulwa noma ukuvala i-hot namanzi.
Servo ukushintsha ukugeleza kokupholisayo ngokusebenzisa valve control.
Ukufakwa thermostat nge Ukushisa phansi uhlelo
Wiring idayagramu for wokubacindezela underfloor ne-thermostat kudinga ukufakwa lwazo zonke izinto ezidingekayo.
Kufakiwe lokushisa inzwa. It zingafakwa screed. Libuye elula ngiyibeke eduze Regulator ukunciphisa ithonya inertia Ukushisa underfloor. Udonga kufanele kube ngaphandle ukushisa, njengoba lesi simiso akusebenzi kahle.
Uhlelo Ukushisa abafake actuator, ophethe supply izifunda ngamanzi afudumele. Kuyinto ezishisayo ikhanda balahleke umqondo umphini (ezimbili noma ezintathu-indlela) noma exhunywe kwi-ezininginingi wesifunda okuphakelayo. Kutholwe ngaphakathi Izifutho egcwele uketshezi lokushisa-sensitive. On isignali thermode ivaliwe wesifunda Ukushisa thermostat oxhumana. Lokhu kunika amandla izakhi ngokufanele emhlabeni Izifutho. Lolu ketshezi uyakhula begodu kokupholisayo ukugeleza ivinjelwe.
Phela ukuxhumana zenziwa ukuze ukucushwa wesifunda imodi othize.
Thermostat ngoba underfloor ngokuyinhloko abakhethiwe kuncike intengo, imisebenzi nokusebenza lula. amadivaysi elula futhi engabizi ezifana ukukhishwa mechanical ngokuqinile German Eberle. abalawuli Okuningi abizayo nge izinhlelo umsebenzi futhi amafemu German Legrand, Kermi nabanye. Zathola nokuthi idivayisi lula futhi singabizi. Indlela ukuxhuma phansi efudumele Kermi thermostat, Devireg, "Teplolux", "Dzhituar" kanye nabanye abaningi kuye imodeli abakhethiwe. Iziqondiso ze ukufakwa kanye nokusebenza, zonke izinyathelo okufanele ngesineke, futhi nje ulandela imiyalelo. Akukho ukusetha olukhethekile mehluko.
Advantageously ukuthola ukuxuba iyunithi ne-thermostat esakhelwe olawula lokushisa lamanzi ngokuxuba ukugeleza ashisayo futhi reverse amanzi. Isetshenziselwa izinhlelo ezinkulu. Nge izifunda eyodwa noma ezimbili-ke akudingekile kanye wesifunda kungenziwa kalula kushintshwe ngesandla.
Thermostat Ukushisa phansi Kufanele kukhethwe futhi axhunyiwe, kuncike ohlelweni lwakho. Isebenza ngokuhlanganyela lokushisa izinzwa kanye actuator. Uma ufaka izinhlelo elula umsebenzi kungenziwa ngokuzimela. izikimu Inxanxathela lubuthwa futhi kushintshwe ngochwepheshe.
Ukuhlanzwa yamanzi indlu ezweni